ज्वरोलाई हेलचेक्र्याई गरेमा घातक रोगको शिकार, झुक्किएरपनि यी खानेकुरा नखानु ! – Jagaran Nepal
ज्वरोलाई हेलचेक्र्याई गरेमा घातक रोगको शिकार, झुक्किएरपनि यी खानेकुरा नखानु !
काठमाडौं । ज्वरो सामान्यतया सबै मानिसहरुलाई आउँछ । ज्वरोबाट कोही पनि अछुत छैन । ज्वरोबाट सबै उमेर समुहका मानिसहरु शिकार बन्न सक्छन् । ज्वरो भनेको कुनै रोग होईन ।
शरीरमा अन्य कुनै रोग उत्पन्न भएमा ज्वरो आउँछ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा ज्वरोलाई अरु कुनै रोगको लक्षण पनि भन्ने गरिएको छ । हाम्रो शरीरको तापक्रम जब ९८.४ डिग्री फरेनहाईट अथवा ३६.८ डिग्री सेन्टीग्रेटभन्दा धेरै भएमा ज्वरो आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
ज्वरो आयो भने कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ ?
सकेसम्म धेरै मात्रामा झोलिलो पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ । ज्वरो उत्रेपछि रोटी, दुध, मूगको दाल, पानी र फलफूल खाने गर्नुपर्छ । पानी उमालेर धेरै मात्रामा पिउनुपर्छ । गर्मी मौसममा ज्वरो आयो भने उमालेर चिसो बनाएको पानीमा कागतीको रस र थोरै नुन मिलाएर पिउनुपर्छ । ज्वरो आएर कमजोर भएमा पानीमा मह मिलाएर खानुपर्छ । पचाउन गाह्रो हुने अँटिलो खानेकुरा खानु हुँदैन । ज्वरो आएको बेला कस्तो खाना खानु हुँदैन ?
तेल, घ्युमा तारेको खानेकुरा खानु हुँदैन । मसलाको मात्रा धेरै भएको खानेकुरा खानु हुँदैन । चिल्लो र बोसोको मात्रा धेरै भएको खानेकुरा खानु हुँदैन ।
ज्वरो आएको समयमा भात खानु हुँदैन । अमिलो फलफूल खानु हुँदैन । खुसार्नीको प्रयोग गर्नु हुँदैन । माछा, मासु, अण्डा पनि खानु हुँदैन ।
ज्वरोको घरेलु उपचार
पूर्ण रुपमा आरम गर्नुपर्छ । कोठामा बस्दा झ्याल, ढोका खुल्ला राख्नुपर्छ । जाडोको कारण ज्वरो आएमा चिसो पानीको पट्टी लगाउनुपर्छ । बिहान बेलुका मुखबाट लामो लामो सास छोड्ने र लिने गर्नुपर्छ । धेरै कडा मेहनत पर्ने खालका कामहरु गर्नु हुँदैन । ज्वरो आएको बेला धेरै बोल्ने बानी हटाउनुपर्छ ।
मनमा कुनै कुराको तनाव राख्नु हुँदैन । समय मौसम अनुसारको पहिरन लगाउने गर्नुपर्छ । हरेक समयमा ब्लाङकेट जस्ता गर्मी हुने कपडा बेरेर बस्नु हुँदैन ।
नोटः माथि उल्लेख गरिएको उपचार विधिमा हामी दाबा गर्न सक्दैनौँ । यो उपचार सबैका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले, यदि तपाईं पनि ज्वरोजस्तो रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तत्काल चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोला ।–सम्पादक